Ny angovo mahery vaika any Espana amin'ny volana Janoary | Fanavaozana maintso
Ny angovo avy amin'ny rivotra no loharano nanampy betsaka an'i Espaina tamin'ny volana Janoary
Ny angovo azo havaozina dia tsy mivoatra amin'ny fomba mitovy daholo, satria miankina betsaka amin'ny faritra misy azy ireo, ireo sehatra natokana ho azy ireo, ny isan'ny olona sy ny orinasa mampiasa vola amin'izy ireo, sns. Nandritra ity volana Janoary ity dia ny angovo avy amin'ny rivotra no nahatonga ny angovo betsaka indrindra tany Espana.
Te hahafantatra ny isan-jaton'ny angovo amin'ity volana Janoary ity ve ianao?
Mandritra ny volana Janoary, angovo avy amin'ny rivotra Izy io dia namokatra 24,7% amin'ny famokarana herinaratra ao Espana. Miaraka amin'ny fangatahana isam-bolana 22.635 GWh, ny herin'ny rivotra dia niteraka 5.300 GWh, 10,5% mihoatra ny tamin'ny volana iray tamin'ny taon-dasa, araka ny angon-drakitra REE.
Na eo aza ny zava-misy fa any Espana dia be ny masoandro amam-bolana, mamokatra ny angovo azo avy amin'ny masoandro photovoltaic io dia tsy mitovy afa-tsy 1,9% amin'ny angovo rehetra.
Any Espana dia misy toeram-piompiana an'arivony mahery ary, noho ny tafio-drivotra mitohy mandritra ny roa volana lasa izay, izy ireo dia miandraikitra ny famokarana herinaratra 25% laninay. Tamin'ny volana desambra 2017 lasa teo, namokatra 25,1% n'ny angovo rehetra io ary ity 24,7% Janoary ity.
Ny herin'ny rivotra dia nanjary safidy izay nanome ny herinaratra betsaka indrindra amin'ny rafitra angovo. Nanomboka tamin'ny 2017, nitombo ny herin'ny rivotra any Espana 95,775 MW ny herin'ny rivotra, izay 59,1 MW no napetraka ao amin'ny Nosy Canary.
Raha atotaly, niitatra tamin'ny tanàna 800, i Espana dia manana herin'ny rivotra 23.121 MW.
Mampalahelo fa, miaraka amin'ireo tafio-drivotra nitranga tany Espana nandritra ireo roa volana ireo, raha toa ka nampiasaina ny ora ny masoandro izay nampiasaintsika, ny angovo azo havaozina dia mety hihoatra ny angovo fôsily ary, miaraka amin'izany, dia nampihena ny fandotoan'ny rivotra ary mampihena ny etona entona entona.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fanavaozana maintso » Angovo azo havaozina » Herin'ny rivotra » Ny angovo avy amin'ny rivotra no loharano nanampy betsaka an'i Espaina tamin'ny volana Janoary
Ireo fiara mpitondra herinaratra dia manintona hatrany ny orinasa